राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उपायहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस्  « Nijamati Khabar
समग्रमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निम्न उपायहरू अबलम्वन गर्नुपर्दछ;
– कानुनी र संस्थागत व्यवस्थामा निरन्तर सुधार गर्ने, तिनको प्रभावकारी पालना गर्ने, गराउने  ।
प्रश्न : सामाजिक मूल्य–मान्यता भनेको के हो ? चर्चा गर्नुहोस् ।
उत्तर : समाज र समाजमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरूको असल आचरण, सहयोगी व्यवहार, नम्रता, शिष्टताजस्ता असल सामाजिक चालचलन एवम् बानी–व्यहोरालाई सामाजिक मूल्य–मान्यता भनिन्छ । समाजमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने आदर, सत्कार, माया–ममता, नम्र र शिष्ट भाषा, इमानदारी, नैतिकता, आज्ञापालना, अनुशासन, गरिब दुःखीमाथि सेवा सहयोग, मित्रवत् व्यवहार, सम्मान, मर्यादा आदि सामाजिक मूल्य–मान्यता हुन् ।
यो समाज र समाजमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरूको आचरणलाई राम्रो नराम्रो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने तथा छुट्याउने आधार पनि हो । सामाजिक मूल्य–मान्यताहरू व्यक्तिले समाजबाट सिकेर ग्रहण गर्दै जान्छ । सामाजिक मूल्य–मान्यताविपरीत जाने व्यक्तिलाई समाजद्वारा अनैतिक मानिन्छ । यसले समाजलाई असल मार्गतर्फ लैजान र खराब व्यवहारबाट नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ । यो सामाजिक संरचनाको मूलआधार पनि हो । सामाजिक मूल्य–मान्यता समाजअनुसार फरक–फरक हुन सक्छ । सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू विशेषगरी धर्मद्वारा निर्देशित हुन्छन् । सामाजिक मूल्य र मान्यता समाजका सम्पूर्ण सदस्यका लागि अनिवार्य हुन्छ । यो सामाजिक नियन्त्रणको महत्वपूर्ण साधन पनि हो ।
समग्रमा नेपालका प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याहरू निम्न छन्;
सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या समाधानमा व्यक्ति, परिवार र समुदायको भूमिका:
– सामुदायिक अस्पतालको स्थापना गर्ने ।